SEO စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ၏ ၀ န်ခံချက် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 13, 2014 သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 26, 2016 Kieran Wilson
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နယူးယောက်စီးတီးရှိယာဉ်ရပ်နားနိမိတ်တစ်ခုကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ လူများစွာသည် SEO အကြောင်း ပြော၍ ရေးသားခြင်းသည်အလွန်များပြားပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆန့်ကျင်နေသည်။ ငါ Moz အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ထိပ်တန်းပံ့ပိုးမှထွက်ရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်ထိုသူတို့အားသုံးမေးခွန်းများကိုမေးသော်:
လူတိုင်းကိုနှစ်သက်သော SEO နည်းဗျူဟာသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။
ဘယ်အငြင်းပွားဖွယ် SEO ဆိုသည်မှာအဖိုးတန်သည်ဟုသင်ထင်သနည်း။
လက်ရှိတွင် SEO အကြီးမားဆုံးသောဒဏ္SEOာရီပုံပြင်ကဘာလဲ။
အကြောင်းအရာများစွာသည်ထင်ရှားပြီးကျွမ်းကျင်သူများအကြားကွဲလွဲမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏နိဂုံးကိုသင်ချပြပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်း၌သင်မျှဝေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
SEO ဆိုတာကမ္ဘာကြီးဟာခေတ်နောက်ကျသွားပြီထင်တယ်။ အမှန်တကယ်အသုံးမကျသောကျယ်ပြန့်သောနယ်ပယ်များကလက်ခံသောနည်းပရိယာယ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒါကသေဖို့လိုတဲ့ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး ဧည့်သည်ဘလော့ဂ်။ ဤတောင်းဆိုမှုများ၏အများစုမှာမကောင်းသောလုပ်ရပ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့တုန့်ပြန်မှုရသောအခါ guest ည့်သည်များပို့စ်တင်လိုခြင်းကိုမလိုချင်သောဆိုဒ်များမှမကြာခဏဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ Rand Fishkin၊ Moz
link ကိုအဆောက်အဦး။ link တည်ဆောက်ခြင်းနည်းစနစ်များနှင့်အကြောင်းအရာများကိုပထမ ဦး ဆုံးဖန်တီးရန်အချိန်ပိုပေးရန်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းမိုက်မဲနေခဲ့ပြီ။ အဲဒါကတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ကိုလှည့်ပတ်သွားတာနဲ့တူတယ်လို့အမြဲပြောခဲ့တယ် ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့်တောင်ကုန်းကိုတက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းမြေထုဆွဲအားက၎င်းကို၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်သည့်နေရာတွင်အမြဲထည့်ပေးလိမ့်မည်။ ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိအခြားမည်သည့်စာမျက်နှာထက်မဆိုသင်၏စာမျက်နှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်မထုတ်ဝေပါနှင့်။ အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တယ် အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအားထုတ်မှုမလိုအပ်ပါ။ ပက်ထရစ် Sexton, အဆိုပါ Bot Feed
လုံးဝအသုံးမကျသောအရာအနည်းငယ်သာရှိပါသည်; အရာအားလုံးကနေရာတစ်ခုရှိတယ်။ ထိုအရာဖြင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုaသို့ထည့်ပါ directoryရာလမ်းညွှန် PR6links4U.biz ဟုခေါ်သောယခုအသုံးမ ၀ င်သောနေရာကိုအန္တရာယ်ရှိသောနယ်ပယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုမိမိတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ညှင်းခြင်းမရှိဘဲထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သောမည်သည့်လမ်းညွှန်ကိုမဆိုသူတို့၏ site ကိုဘယ်တော့မှမထည့်ရန်လူတို့အားအကြံပေးသည်။ ဖီးလ် Buckley, Curagami
ဧည့်ဘလော့ဂ်။ ယခုတွင်ငါသည်ဤလှည်းကိုတိုင်နှင့်ထိတော့မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင်သာဖြစ်သည်။ ဒီဟာတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေသေးပေမယ့်လူတွေဟာဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရဖို့လမ်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုအတွေးထဲကနေထွက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ အန်ဒီယိုသောက်ရေ၊ iQ SEO ဆိုသည်မှာ
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါထင်ပါတယ် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသုံးမကျသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည် - ၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်သုံးသောအခါ (ဟေ့ကြည့်ပါ၊ ရဲမှထွက်လာသည်အဖြေ) ။ လူများစွာသည်အကြောင်းအရာများကိုချဉ်းကပ်ရန်“ တည်ဆောက်ပြီးသူတို့လာလိမ့်မည်” ကိုကျင့်သုံးသည်ကိုတွေ့ရပြီး၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာများကိုထိုနေရာတွင်ထားလိုက်ပြီးအချိတ်အဆက်များ၊ အစုရှယ်ယာများနှင့်ရလဒ်များကိုမျှော်လင့်လျက်မြည်းပေါ်တွင်ထိုင်နေကြသည်။ ဒီလိုမျိုးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး သင်၏အကြောင်းအရာကိုမည်သို့စျေးကွက်တင်ကြောင်းနှင့်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုမထုတ်လုပ်မီ၊ သုတေသနကိုအလားအလာရှိသောအကြောင်းအရာစိတ်ကူးများသာမကဘဲထုတ်ဝေရန်အလားအလာများကိုရှာဖွေသင့်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များကကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရသည့်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပို့စ်တစ်ခုမှာဂူဂဲလ်သတင်းများကိုဖောက်ထွင်းရန်ဖောက်သည် Dev Labs မှလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောခေါင်းစဉ်ကိုဖော်ပြပြီးနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်လိုသူစာရေးဆရာများကိုရှာဖွေရန်လမ်းညွှန်များစွာပေးသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောသုတေသနနှင့်ပေါင်းစပ်ပါကတန်ဖိုးမရှိခြင်းမှအဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ Tom Roberts သည်
ငါ Meta သော့ချက်စာလုံးများအနည်းငယ်အချည်းနှီးဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောလိမ့်မယ် အချို့ webmasters များသည်ဤ spamming ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ Bing အတွက်တော့ Google အတွက်တန်ဖိုးပေးကောင်းပေးလိမ့်မယ်။ ဂျိမ်း Norquay, Prosperity မီဒီယာ
လူတွေအများကြီးပေါ်ခုန် နောက်ဆုံးပေါ် SEO ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအကြောင်းအရာအများစုကိုပြောနေတာကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ site ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့သူတို့အမှတ်တံဆိပ်မှာသူတို့စဉ်းစားစရာမလိုပဲ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် PR စနစ်သည်အခြားနေရာများထက်အချို့သောနယ်ပယ်များအတွက်ပိုမိုထိရောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာအစပိုင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းဗျူဟာများအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုနယ်ပယ်အတွင်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အကျိုးအမြတ်ပေါ် မူတည်၍ လျှော့ချသည်။ ရှိမုန် Penson, Zazzle
ကျွန်တော်အဲဒီလိုမပြောပါဘူး rel = ရေးသားသူ တန်ဖိုးမရှိသည်၊ ၎င်းသည်အနာဂတ်အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပုံရသော်လည်းယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အဓိကအချက်မဟုတ်ဟုငါထင်သည်။ ယခုတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်များကိုမတွေ့ရသေးပါ။ ဒန်နီဒိုဗာ, Lifelisted.com
SEO တော်တော်များများကသူတို့ကို nofollow link တစ်ခုလုပ်ပေးတာကိုလျစ်လျူရှုကြပေမယ့်ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ် nofollow လင့်များ ကြောင်းအရည်အချင်းပြည့်အသွားအလာပေးပို့လိမ့်မယ်။ Rand Fishkin၊ Moz
ငါမသေချာဘူး အငြင်းပွားဖွယ် ဒီဖော်ပြရန်မှန်ကန်သောနာမဝိသေသနဖြစ်ပါတယ် ဧည့်သည်တင်ခြင်း အကယ်စင်စစ်၎င်းသည်၎င်းမျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မကြာသေးမီကဂူးဂဲလ်နှင့်အခြားသူများကလွှမ်းမိုးထားခြင်းခံရသည်။ လက်တွေ့တွင်ပြguestနာမှာ post ည့်သည်များတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ။ ကျွန်ုပ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအကြောင်းအရာကြီးများဖန်တီးခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းအနုပညာဖြစ်သည်။ သို့သော်အစား spam spy နည်းဗျူဟာတစ်ခုတည်းသောတံဆိပ်ဖြင့်တံဆိပ်တပ်ထားသည်။ အမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်အရာမှာစျေးပေါ။ ဖတ်။ မကုန်နိုင်သောအကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်းနှင့်၎င်းကို link တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အရည်အသွေးညံ့သော site တစ်ခုကိုပေးဆပ်ခြင်းသည်အလေ့အကျင့်မကောင်းသောကြောင့်ရပ်တန့်သင့်သည်။ သို့သော် guest ည့်သည်များပို့စ်မဟုတ်ပါ၊ spam ဖြစ်သည်။ ရှိမုန် Penson, Zazzle
ဧည့်ဘလော့ဂ်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်မှုရှုထောင့်နှင့်ပရိသတ်အသစ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။ သင်လုပ်နေသည့်အကြောင်းအရင်းသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်သာဖြစ်ပါကမနှောင့်ယှက်ပါနှင့်၊ သို့သော်သင်၏ရည်မှန်းချက်သည်စာဖတ်သူများအားပညာပေးရန်နှင့်နှစ်သက်စေရန်ဖြစ်ပါကအပြုသဘောဆောင်သောစီးပွားရေးရလဒ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဖီးလ် Buckley, Curagami
ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါခြံစည်းရိုးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထိုင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်၊ ပြီးတော့အဲ့ဒီ့မှာငါရွေးထားတယ်။ စာမျက်နှာအဆင့်ပန်းပု နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ SEO ဆိုင်ရာလောကရှိသူများအကြားခံစားချက်ရောထွေးနေသောနယ်ပယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဂူဂဲလ်ဘော့တ်သည်လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါသင်ပြissuesနာများကိုမဖြေရှင်းလိုသောကြောင့်၎င်းကိုဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရမည်။ မှန်ကန်စွာရယူပါ၊ ရရှိရန်အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျိန်းသေပါသည်။ အန်ဒီယိုသောက်ရေ၊ iQ SEO ဆိုသည်မှာ
ငါပြောရမယ် ဧည့်သည်တင်ခြင်း၎င်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အဆိုပြုချက်ကိုရယူရန်ပိုကြီးသောသို့မဟုတ်အခြားပရိသတ်တစ်ခု၏ရှေ့မှောက်၌ရယူရန်အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါထုတ်ဝေသူအတွက်အလုပ်လုပ်သကဲ့သို့ငါမကြာခဏစိတ်ကူးများနှင့် / သို့မဟုတ်ကွင်းပို့စ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော guest ည့်သည်များရ။ သင်သည်သင်၏ 'A' ဂိမ်းကိုအမြဲယူဆောင်လာသင့်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကြိုးစားသင့်သည်။ Martijn Scheijbeler, The Next ကိုဝဘ်
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အဲဒီတံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့နည်းပရိယာယ်အားလုံး အနက်ရောင် - ဦး ထုပ်အကယ်၍ ဦး ထုပ်သည်သင်၏အရာဖြစ်လျှင်တန်ဖိုးအချို့ရှိသည်။ တရားမဝင်သော (တရားမ ၀ င် Joomla plugin exploiters မှလွဲ၍) သင်ဤနည်းဗျူဟာအားလုံး၏တန်ဖိုးကိုဘလော့ဂ်ကွန်ယက်များ၊ ချိတ်ဆက်ငှားရမ်းမှုများ၊ ပြန်ညွှန်းများသို့မဟုတ်ကောင်းသောဟောင်းနွမ်းသော spam များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ။ အချို့သော SEO များကဤနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုနေရသည့်အကြောင်းရင်းမှာသူတို့အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာဝင်ငွေရနေတုန်းပဲ။ သေချာတာပေါ့၊ ဆိုဒ်များသည်နောက်ဆုံးတွင်ဒဏ်ခတ်ခံရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာလျှင်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုရရှိနိုင်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဤကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားနေပါကသင်ရိုက်ကူးသင့်သည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ online တည်ရှိမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင် SEO ကိုသင်အပြစ်ပေးပြီး deindexed ကိုမြင်တွေ့ရသော SEO နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည် SEO ဂိမ်းမှလုံး ၀ ထွက်သင့်သည်။ မင်းကမိုက်မဲတယ်၊ မင်းကရုပ်ဆိုးတယ်၊ သူငယ်ချင်းမရှိဘူး။ ၎င်းအစားစမ်းသပ်မှုကိုသီးခြား ထား၍ ၎င်းကိုလုံးဝသီးခြား site တစ်ခုတွင်နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသော့ချက်စာလုံးအုပ်စုတစ်ခုထဲတွင်သိမ်းထားပါ။ နည်းလမ်းအချို့ကိုစမ်းသပ်ပါ။ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အသွားအလာနှင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုကိုတိုင်းတာပါ။ သင်ငွေဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သလဲ အချိန်ဘယ်လောက်လဲ အဲဒါကျိုးနပ်ပြီလား။
၎င်းကို R&D ဌာနတစ်ခုအနေနှင့်စဉ်းစားပါ - စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့် ၀ င်ငွေရရှိနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းလမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအားကြွေးတင်နေသည်။ ဤသည်အခြားနည်းစနစ်များအချို့ကိုအဲဒီလိုလုပ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကငွေရေးကြေးရေးအရအလားအလာမရှိပါ။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့လုံးဝကျရှုံးနိုင်တယ်။ ဆိုလိုတာကသင့်အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ဖို့ပါပဲ။ တံဆိပ်များနှင့်ကြိုတင်ခြွင်းချက်များဖယ်ရှားပြီး data ကိုသွားပါ။ Tom Roberts သည်
အဲဒါဟာစကားအပြန်အလှန်ပြောရရင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ဆဲပါ အတိအကျကိုက်ညီသော domains များ (EMD's) နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုက်ညီသော domain များသည် SEO တန်ဖိုးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်တွင် EMD မရှိပါကသင် EMD ရှိသူကိုအဆင့် သတ်မှတ်၍ မရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် EMD သို့မဟုတ် PMD တစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါက၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ Robert Fisher သည်သမ္မတ၊ drumBEAT စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ငါ webmasters တည်ဆောက်ခြင်းဟုပြောလိမ့်မယ် domains များကျဆင်းသွားသည် ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ရက်စာမျက်နှာများသို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ထားသောပရိုဖိုင်းသည်သန့်ရှင်းနေပါက၎င်းသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများကိုအကြီးအကျယ်စကေးချဲ့ထွင်သောအခါဂူဂဲလ်က၎င်းကိုရှင်းပစ်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျအခြို့သောငွေရှာချင်သော affiliates များအတွက်ခံစားရသည်။ James Norquay၊ အကြံပေးဒါရိုက်တာ၊ Prosperity Media
ဒါဟာကြည့်ဖို့စတင်နေသည် Adwords ဖြုန်းနေကြတယ် တကယ်တော့အော်ဂဲနစ်တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါကတိုက်ရိုက်အတူတကွချည်နှောင်ထားသည်ထင်ကြပါဘူးဒါပေမယ့်ငါ့အ Datasets ကနေဆက်စပ်မှုကြောင်းကိုသိသာသည်။ ဤသည်ဆက်စပ်မှုကိုမသိရသေးသည့်အခါလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဂူးဂဲလ်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီကြီးများထံမှဖိအားများများပိုများလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ဌာနတွင်းနံရံများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများကိုလျှော့ပေါ့ပစ်မည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဒန်နီဒိုဗာ, Lifelisted.com
ထိုအဆောက်အ ဦး သည်ဒဏ္thatာရီများစွာရှိသည် ကောင်းသော, ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာ အဆင့်သတ်မှတ်ရန်လုံလောက်သောကောင်းသောဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကအချိန်ကြာမြင့်စွာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး, နှင့်တွားနှင့်ရည်ညွှန်းခံရဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းသောမဆိုလိုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင်အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုမထုတ်လုပ်ပါက၊ Google သည်သင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်အဆင့်သတ်မှတ်သင့်သနည်း။ Rand Fishkin၊ Moz
ထို ည့်သည်ပို့စ်သေပြီ! ထို့အပြင် SEO ဆိုသည်မှာ၎င်း၏လမ်းပေါ်ထွက်နေသည်။ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်တန်ဖိုးရှိသည့်ပရိသတ်များတည်ဆောက်ခြင်းသည်အချိန်မရွေးပျောက်ကွယ်သွားတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည် SEO တစ်ခုလုပ်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်ဆက်နေရန်ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရရန်လိုအပ်သည့်နည်းဗျူဟာများသည်ယခုတွင်အခြားစည်းကမ်းများပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းသည်ရုပ်သံလိုင်းမှ ROI ကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အရေးပါသည်။ ရှိမုန် Penson, Zazzle
ကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းထဲမှာ SEO အကြီးမားဆုံးသောဒဏ္myာရီတစ်ခုပါ SEO သည်ဒီဇိုင်းထက် ပို၍ ထိရောက်သည် နှင့်အသုံးဝင်မှု။ SEO ဆိုသည်မှာ site ကိုအလုပ်ဖြစ်စေသောအစိတ်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ပက်ထရစ် Sexton, အဆိုပါ Bot Feed
တစ်ယောက်ယောက်က 'SEO ငါ့ဆိုဒ်' လို့ပြောရင်အဲဒါတကယ်ဘာသာပြန်တာက \_ t ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ SEO ဆိုတာကမဟုတ်ပါဘူး stand-alone လိုက်စား နောက်တဖန်မ။ သင်၏ SEO လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုဘေးဖယ်ထားပါကသင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောက်ရှိမှု၏အခြားရှုထောင့်များအားလုံးခံစားရမည်။ SEO ၏ Venn ပုံသည်စာရေးသူများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ လူထုဆက်ဆံရေး၊ ဗီဒီယိုနှင့် R&D တို့နှင့်ထပ်တူကျနေသည်။ ဖီးလ် Buckley, Curagami
Meta tags တွေကိုသုံးတာကအကျိုးရှိတယ်၊ Keyword Density။ ဤအရာတစ်ခုခုကိုထံမှသင်၏ရွေးယူပါ။ Meta tag များသည်သော့ချက်စာလုံးများအားလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဂူးဂဲလ်မှဖယ်ထုတ်ထားသော်လည်းအချို့က၎င်းတို့သည် Bing တွင်အနည်းငယ်သာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုကြသော်လည်း၎င်းသည်အသေးစားဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် Keyword Density ကိုရယူခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့သည့်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SEO ကုမ္ပဏီများမှရရှိသော spammy e-mail များပေါ်တွင်၎င်းတို့အကြောင်းပြောဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်၏စာမျက်နှာကိုသော့ချက်စာလုံးများနှင့်ပြည့်နေအောင်လုပ်ပါ၊ ပြီးလျှင်သင်ဟာအကောင်းထက်အဆိုးပိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အန်ဒီယိုသောက်ရေ၊ iQ SEO ဆိုသည်မှာ
သငျသညျမပေးသင့်ကြောင်း လမ်းကြောင်းအဆင့် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီခရီးကိုသိပ်ပြီးစိတ်မ ၀ င်စားကြတာကြောင့်ပါ။ 'not available' ကိုစတင်ပြီးကတည်းကဘာကြောင့်သူတို့ကိုခြေရာခံသင့်တယ်ဆိုတာကို SEO တော်တော်များများကဒီအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ကြတာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကောင်းမွန်သောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့နှင့်လုံးဝသဘောတူသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားစျေးကွက်တွင်သင်၏လက်ရှိအခြေအနေကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကသော့ချက်ကျသောသုတေသနကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ပေါင်းစပ်။ အလားအလာရှိသောပြိုင်ဘက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်များကိုလည်းပေးသည်။ Martijn Scheijbeler, The Next ကိုဝဘ်
ထို SEO ဆိုသည်မှာသင်လိုအပ်သမျှ။ သင်ဟာ SEO ကောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းသည်ဟူသောအများလက်ခံသောအမြင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လများအတွင်းဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ။ ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးအများဆုံးဒဏ္myာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုး၊ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ SEO ဆိုသည်မှာစျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ Moosa Hemani၊ SEtalks
SEO အတွက်အသစ်ပြောသောသူများကိုကျွန်တော်အမြဲပြောနေသည့်အရာမှာဖောင်းပွမှုအားလုံးကိုမယုံဖို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်၏စကားလုံးကို ospel ၀ ံဂေလိတရားအဖြစ်မယူရန်နှင့်သင်ဖတ်ရှုသည့် SEO ဘလော့ဂ်တိုင်းကိုမယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာ SEO ဘလော့ဂ်များမှအများစုသည်အကြွင်းမဲ့သက်ဆိုင်သည်။ အများစုမှာသီအိုရီများ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည်။ SEO ဘလော့ဂ်ဂါအတော်များများသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ပိတ်မည်ကိုမသိကြဘဲ၎င်းသည်ခုန်။ မျက်နှာပေါ်ထိမှန်လျှင် ၄ င်းတို့အများစုသည်နှိမ့်ချမှုကိုမသိကြပါ။ ဒီဟာကိုမထင်မှတ်တာနဲ့မတူဘူးလားဆိုတာကိုပေါ့။
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိလူများအတွက်၊ စာရေးသူ၏ရာထူးသည်ဒဏ္myာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံး SEO ဘလော့ဂါများက၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုယုံကြည်သည့်နည်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်ရဲ့အကြံဥာဏ်ကတော့ဆူညံသံအားလုံးကိုရှောင်ရှားပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘီလ်စလိုဗစ်နဲ့မာ့ခ်ထရာဖာဂင်တို့ပြောတာတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါ ဦး ။ အနည်းဆုံးတော့သင့်တော်တဲ့ဗဟုသုတရလိမ့်မယ်။ Tom Roberts သည်
သူတို့ (သို့) သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုပြောတဲ့လူအများစုက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် SEO ကုမ္ပဏီ တကယ်တော့ SEO အသိပညာကိုတောင်းဆိုသောကုမ္ပဏီအများစုသည်အကောင်းဆုံးမှာ SEO နှင့် ပတ်သက်၍ ၁၀% သို့မဟုတ် ၁၁% နားလည်မှုရှိသည်။ Robert Fisher, drumBEAT စျေးကွက်
အကြီးမားဆုံး SEO ဒဏ္myာရီကတော့ဒေါ်လာ ၁ သန်းပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ် PPC ကတကယ်ကူညီလိမ့်မယ် သင်၏ SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။ ဂျိမ်း Norquay, Prosperity မီဒီယာ
လက်ရှိအကြီးမားဆုံး SEO ဆိုသည်မှာဒဏ္myာရီဖြစ်သည် SEO ဆိုတာကရှင်သန်နေဆဲ၊။ အဖြစ်မှန်တွင် SEO နှင့်ထိရောက်ရန်ယခင်ကထက် ပိုမို၍ ခက်ခဲသည်။ နေ့စဉ် SEO သည်အားနည်းသောအော်ဂဲနစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လာသည်။ ဒန်နီဒိုဗာ, Lifelisted.com
အကယ်၍ သင်သည် PR သို့မဟုတ် content marketing ပြုလုပ်ပြီးတန်ဖိုးမြင့် link လင့်များကိုရယူပါက text link များမပါဘဲလာလိမ့်မည်။ SEO ပဟေpိ၏တစ်ခုတည်းအပိုင်းအစ။ ဒေးဗစ် Konigsberg, အကောင်းဆုံးပစ်မှတ်
Tags: adwords ဖြုန်းနေကြတယ်အန်ဒီ Drinkwaterစာရေးသူအနက်ရောင်ဦးထုပ်အနက်ရောင် ဦး ထုပ် seoအကြောင်းအရာစျေးကွက်အငြင်းပွားဖွယ် seoကုလားဒန်နီဒိုဗာdavid konigsbergပုံစံdirectory များdomains များကျဆင်းသွားသည်drumbeat စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိအကျကိုက်ညီသောဒိုမိန်းbot ကိုအစာကျွေးအကြောင်းအရာကောင်းဧည့်သည်ဘလော့ဂ်iNet SEOiQ SEO ဆိုသည်မှာဂျိမ်း Norquayသက်တမ်းLifelisted.comlink တည်ဆောက်ခြင်းmoznofollownofollow လင့်များအကောင်းဆုံးပစ်မှတ်စာမျက်နှာရာထူးပန်းပုPatrick sextonphil buckleyppcပရော်ဖက်ရှင်နယ် seoProsperity မီဒီယာfishkin randrobert Fisherseo အသကျရှငျသည်seo သေပြီse ဒဏ္myာရီseo ဒဏ္myာရီများseo နည်းဗျူဟာများseo နှင့်ဒီဇိုင်းနှိုင်းယှဉ်ဆိုင်မွန် PensonTom robertsထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတန်ဖိုးမရှိ SEOZazzle
Kieran Wilson သည်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာဖြစ်သည် အလိုအလျောက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမကြာမီက Wordsmith for Marketing, ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများအတွက်သုံးစွဲသူများအားသတင်းပို့ခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမကြာသေးမီကစတင်ခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ၊ တွင်းထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ Kieran သည်ဤအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏပြောလေ့ရှိသည်။ သူမသည်အောက်ခြေအဆင့်မှကွဲပြားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနသုံးခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ခုမှာ Omnicom လက်အောက်ခံတစ်ခုနှင့် ဦး ဆောင်သောလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပါဝင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ နည်းဗျူဟာနှင့်ရလဒ်များ
Newsjacking သည်မကောင်းသောမဟာဗျူဟာမဟုတ် - မနှစ်မြို့ဖွယ်မရှိလျှင်
သြဂုတ် 15, 2014 မှာ 9: 40 AM
Kieran အလွန်ကြီးကျယ်သော! ဤနေရာတွင်မျှဝေထားသောအလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။